कविता – आभास
मैले एक हातले सियो समाते अनि अर्को हातले धागो समाते दुवै एकअर्काको नजिकै लगे र उने तिम्रो र मेरो सम्बन्ध ! छातीका कयौं फाटेका ठाउँहरुमा अघि उनेको सियो धागोले सिलाउदै गएँ घाउ सानो र टालीए जस्ता भए ! मैले लेखे धेरै कथा, कविता, गीतगजलहरु अघि उनकै सियो र धागोको भरमा मैले बनाएँ कति …
एउटा भुल Read More »
दुइ/दुइ – एक !
हाम्रो भेटको निकै पछी हामी एक भएका थियौ तिमीले मलाई आफ्नो दिलमा कैद गरेकी थियौ अनि मैले तिमीलाई आफ्नो दिलमा ! अहिले सम्झिदा यस्तो लाग्छ म तिम्रो र तिमी मेरो त्यहि बेला भैसकेका रैछौ जब हाम्रो पहिलो भेटमै मेरा आँखाले तिमीलाई कैद गरेका थिए अनि तिम्रा आँखाले मलाई !
1 Comment	/ कविता / By Abhash Acharya
मलाई नसोध जिउनु के हो भनेर जिन्दगी जिउन छोडेको धेरै भैसक्यो ! त्यो बेला जिउथे जस्तो लाग्छ जब आमाको काख मेरो सिरान हुन्थ्यो अनि म निदाईदिन्थे निस्फिक्री ! जिन्दगी त त्यो बेला जिउथे जस्तो लाग्छ जब बाको चोरी औंला समातेर घन्टौ ताते ताते गर्थे ! मलाई नसोध मुस्कुराउनु के हो भनेर जिन्दगीमा मुस्कुराउन …
मलाई नसोध Read More »
एक पछिको अर्को सर्को बिसाउदिन हातको गिलास न गफ नै रोकिन्छ सायद चियाले ओठमा तागत पो दिन्छ कि ? साउनीको मन्द मुस्कानले हो कि ! माघको यो जाडोले पो हो कि ! ओठ बोल्छ दिमागले थाहा नपाई अर्को एक कप !! जे होस् चिया को सर्को संगै गिलास रित्तिदै छ बैसको यो जवानी नि ! …
चिया जिन्दगी Read More »
जाने हो ? बानेश्वर, तिनकुने, जडिबुटी, प्लानिंग यात्रु समेट्ने गरि हात फैलाएर आएको हुन्छ स्टेसनका मान्छे नचड्ने भएपछी त्यहि हात ल्याएर टिनमा बजार्छ दुइ चार चोटी लगातार सायद, रिस पोखेको होला ! तिनै स्टेसनका मान्छे जाने भएपछी कति मज्जाले भन्छ पर्खनुस् दाइ झर्नेछ | अनि ढाड सुम्सुम्याएझैँ गरी चढाउछ टिनको बाकसमा र बनाइदिन्छ बन्दक ऊ …
खलासी Read More »
दुनिया नतमस्तक छ दुनियाको चाल देखेर दुनियाको तालको दुनियालाइ पर्बाह छैन नत्र सुन्थ्यो होला नि गुरुजीले बजाएको हरन अनि गुरुजीले पढाएको पाठ दुनिया रमेको छ आफ्नै दुनियामा ! जीवन जिउन नजानेकाहरु कराइरहेका हुन्छन् ! अनि बाटाबाटा चिच्याईरहेका हुन्छन् फलानोले तिलानो गर्न जानेन भनेर अनि धिक्कारि रहेको हुन्छ संसारलाई सोहि बाटो शालीन भएर वाइट क्यानलाइ सहारा …
दुनियाँ Read More »